Dị ka elu foto gosiri, ma eleghị anya, gị n'ógbè ahụ bụ otu dị ka nke a, ọ bụ oge ufodu na ị chọrọ chepụta ya na pụrụ iche ịke.Ma WPC decking factory mgbe niile gwara gị na ha ga-emepụta otu ma ọ bụ abụọ size na ogologo ngwaahịa. Mgbe ị na-anụ ndị a, ị nwere ike iche ...
Tipsfọdụ Ndụmọdụ Banyere WPC
Ngwa osisi plastik (WPC) na-enweta uru nke osisi na ihe polymer, mana ọ bụ n'efu na adịghị ike ha. Ihe WPC dị elu, na-egbochi ire ere, nguzogide ihu igwe, nkwụsịtụ. Enwere ike iji ya mee ihe na mbara ala, ịkọ ugbo, ime obodo. na ọzọ n'èzí n'elu ikpo okwu. Ya mere mmadụ ...
Enwere ike WPC decking agba?
WPC decking dị mkpụmkpụ maka osisi plastik na decking ọtụtụ ihe, ọ na-abụwanye ewu ewu na ụwa niile.When anyị na-akọwa decking mejupụtara, anyị na-ekwu mgbe niile WPC decking abụghị eserese, ọ dịghị gluu, obere mmezi. nwere ike WPC decking mbadamba a ga-ese? Ọ bụrụ na nwere ike, olee otú t ...
Hichaa ma dozie ebe obibi WPC
WPC decking nwere ọtụtụ uru karịa ọdịnala osisi siri ike ma na-aghọwanye ewu ewu mana mana enweghị WPC decking bụ 100% mmezi n'efu .Mgbe eji ya eme ihe, ọ ka chọrọ ọtụtụ mmezi oge iji gbatịkwuo ọrụ ahụ, mana mmezi dịkwa mfe na ...
Ntuziaka nwụnye nke WPC Wall Cladding
WPC bụ mkpụmkpụ nke osisi plastic na ọtụtụ ndị mejupụtara, ọ bụ ihu igwe na-eguzogide, waterproof, ahụhụ na mgbochi na ala itọju. N'ihi ọtụtụ ikike dị mma, ọtụtụ ndị mmadụ ga-ahọrọ WPC mgbidi panel ka ha chọọ mgbidi ha. Yabụ ma eleghị anya ụfọdụ ndị ahịa ga-emegharị ihe gbasara nwụnye, ya na inst ...
Olee otú Iji Wụnye WPC Decking?
WPC Decking na-enweta uru nke ma osisi ma ihe polymer, mana enwere onwe ha site na adịghị ike ha. Ya mere decking mejupụtara na-ewu ewu na ụwa niile.Ma eleghị anya ị ga-echegbu onwe gị maka nrụnye ahụ, echegbula ya. mfe instal ...
Kedu ihe bụ co-extrusion?
Co-extrusion, teknụzụ kachasị ọhụrụ na ọtụtụ ihe mejupụtara osisi, teknụzụ a dị elu bụ nke gbakwunyere na isi, ihe dị elu ya bụ ihe na-enye kọọdụ ọ bụla ihe pụrụ iche na arụmọrụ kachasị elu. elu agaghị agbasa na ...
Lihua WPC 3D Embossed Composite Decking bụ teknụzụ teknụzụ ọhụụ, ma ọ bụ ị nwere ike ịkpọ ya nke ọma ma ọ bụ buru ibu. New technology 3D embossing ...
WPC bụ mkpụmkpụ nke osisi plastic mejupụtara, isi ihe bụ Pee na osisi emep uta eri.WPC enweta uru nke ma osisi na polima materials.But free ha shortcomings.It bụ ihe magburu onwe dochie anya osisi.WPC decking bụ n'ụzọ siri ike na-adịgide adịgide ma mara maka ya ọmarịcha, ezi uche aesthe ...
WPC mejupụtara decking, N'èzí WPC decking, WPC ụlọ, WPC n'èzí decking, osisi plastic mejupụtara decking, WPC decking n'ala,